तीन अनुप्रयोगहरू तपाईले आफ्नो इकमर्स व्यापार कुशलतापूर्वक चलाउनु पर्छ Martech Zone
मङ्गलबार, डिसेम्बर 18, 2018 सोमबार, जनवरी 27, 2020 सारा सेकर
त्यहाँ धेरै धेरै इ-कॉमर्स रिटेलरहरू छन् - र तपाईं तिनीहरू मध्ये एक हुनुहुन्छ। तपाई यसमा लामो यात्राको लागि हुनुहुन्छ। त्यस्तै, तपाईले अहिले इन्टरनेटमा सयौं हजारौं अनलाइन स्टोरहरूको सबै भन्दा राम्रोसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुनु आवश्यक छ। तर तपाईं कसरी गर्नुहुन्छ?
तपाइँ तपाइँको वेबसाइट यस्तै हो भनेर निश्चित गर्न आवश्यक छ अपील गर्दै सकेसम्म। यदि यो राम्रोसँग डिजाइन गरिएको छ भने छैन राम्रो नाम छ, तपाईका फन्टहरू अत्यन्त सानो छन् (वा धेरै ठूला), तपाईको लोगो तपाईको अनलाइन स्टोरको पृष्ठभूमिसँग मिसाउँदछ, नेभिगेसन बटनहरू एउटा अप्ठ्यारो स्थानमा छन् (खोजी पट्टी सोच्नुहोस्!), वा यदि तपाइँले आफ्नो वेबसाइटमा छनौट गर्नुभएको रंगहरू गर्नुहोस् भने तपाईंले बेच्ने संस्कृतिसँग राम्रोसँग काम नगर्नुहोस्, त्यसोभए तपाईंले आफ्नो डिजाइनमा पुनर्विचार गर्नुपर्नेछ। त्यो तपाईंको सुरूवात विन्दु हो।
यदि तपाईंको ईकॉमर्स स्टोर छ व्यावसायिक यसलाई महसुस गर्नुहोस्, त्यसोभए तपाईंले बेच्नुहुने उत्पादनहरू हेर्नु आवश्यक छ। के तिनीहरू ती हुन् जुन विस्तृत श्रोतालाई अपील गर्दछ, वा तपाईं ग्राहकहरूको अधिक विशिष्ट समूहको लागि लक्ष्य गर्दै हुनुहुन्छ? जे भए पनि ठीक छ, तर यसले तपाईंको सफलतालाई असर गर्न सक्दछ यदि तपाईं आफ्नो ग्राहकलाई पूरा गर्नुहुन्न भने। साथै, के यी उच्च गुणका वस्तुहरू छन् वा ती सस्ता आयातहरू हुन्? यदि तपाइँका उत्पादनहरू खस्कछन् भने, त्यसोभए तपाइँ पनि गर्नुहुनेछ।
एक पटक हेर्नुहोस् मार्केटिङ। तपाइँ कसरी आफ्नो व्यापार को मार्केटिंग गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईं कुन साईटहरूमा विज्ञापन गर्दै हुनुहुन्छ र ती प्लेटफर्महरू कत्तिको प्रभावकारी छन्? के यो तपाईको पैसाको राम्रो उपयोग हो? निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईको पैसाको लागि तपाईले सब भन्दा ठूलो धमाका पाउनु भएको छ र तपाईका प्रयासहरू सकेसम्म सक्षम छन्।
यदि ती सबैले काम गरिरहेको छ भने, यो समय तपाईंको व्यवसायलाई मूलधारमा पार्ने समय हो। यदि सबै अरू ठाउँमा छन् भने, तपाईं ग्राहक सेवा, सेवाको गति, र व्यापार पुनःपूर्ति सुधार गर्न तपाईंको व्यक्तिगत प्रक्रियाहरू र कार्यहरू हेर्न सुरू गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंलाई तपाईंको व्यवसायको यी पक्षहरूको साथ मद्दत गर्न, हामी केही उत्तम अनुप्रयोगहरूको चर्चा गर्दछौं जुन तपाईंले आफ्नो ईकॉमर्स स्टोर प्रबन्ध गर्न सक्नुहुनेछ।
यो गुगल विश्लेषण अनुप्रयोगले तपाईंको दुबै व्यापार र बिक्रीको मार्केटिंग पक्षमा तपाईंलाई किनारा दिनेछ। अनुप्रयोगले तपाइँलाई तपाइँको वेबसाइट भ्रमणहरूको ट्र्याक राख्न अनुमति दिन्छ। तपाईं प्रत्येक व्यक्तिगत पृष्ठले प्राप्त गरेको हेराईहरूको संख्या देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईंले अनुप्रयोगमा सेट गर्नुभएको फिल्टरहरूद्वारा निर्धारित समयको क्रममा तिनीहरू प्राप्त हुने संख्या पनि देख्न सक्नुहुनेछ।
यस अनुप्रयोगले तपाइँलाई हेराइहरू कहाँबाट आउँदैछ भनेर हेर्न दिन्छ। तपाईका ग्राहक सम्भावित बहुमतले तपाईको इ-कमर्स साइट विदेशबाट किनमेल गर्न सक्दछन् र तपाईले यसलाई महसुस गर्नुहुन्न। यी लिडहरू हेरेर तपाईंलाई तपाईंको व्यवसाय मोडल परिवर्तन गर्न र तपाईंको उत्पादनहरू खरीद गर्नमा रुचि राख्ने विदेशी ग्राहकका लागि तपाईंको अनलाइन स्टोर पूरा गर्न अनुमति दिनेछ।
साथै, बिक्री भइरहेको पृष्ठहरू देखेर, तपाईं आफ्ना ग्राहकहरूले खरीद गरिरहेका उत्पादनहरूको प्रकारहरू देख्न सक्नुहुनेछ। यसले तपाइँलाई बेच्न नसकेका कुनै पनि वस्तुहरू खाली गर्न र तपाइँको ग्राहकहरूले चाहेको उत्पादनको एक लाइनमा ल्याउने मौका दिनेछ।
गुगल एनालिटिक्स को लागी साइन अप गर्नुहोस्
यो एक अद्भुत अनुप्रयोग हो! ईंट र मोर्टार व्यवसायहरू उत्पादनहरूसँग उनीहरूको स्टोरहरू आपूर्ति गर्ने बढी पारम्परिक मोडेलमा निर्भर हुनुपर्दछ: थोक व्यापारीहरू जसले उनीहरूले आफ्नो पसलमा बोक्न चाहेको सामान बोक्छन्, फेला पार्नुपर्दछ, त्यसपछि उत्कृष्ट मूल्य निर्धारण डिलहरू प्राप्त गर्न थोरै मात्रामा खरीद गर्नुहोस् (वा किनभने थोक बिक्रेताको लागि पुग्न न्यूनतम अर्डर साइज चाहिन्छ)।
त्यसोभए उनीहरूले हप्ता पछि उत्पादन आउन पर्खनु पर्नेछ। वाल-मार्ट र लक्ष्य जस्ता चेन रिटेलरहरूको मामलामा, थोक वस्तुहरू पहिले व्यवस्थित हुनु अघि वितरण केन्द्रमा डेलिभर गर्नुपर्दछ, प्रत्येक स्टोरको लागि लोड गरिएको हुन्छ, त्यसपछि छुट्टै स्टोरहरूमा पठाइन्छ।
ईकॉमर्स खुद्रा विक्रेताहरु तिनीहरूका उत्पादनहरु को बहुमत को लागी परम्परागत थोक बिक्रेताहरु मा निर्भर गर्दछ। तर समय परिवर्तन हुँदैछ, र ओबेरोले सानो, अनलाइन स्टोरहरूलाई उनीहरूको उत्पादनहरू बेच्ने उत्तम तरिका दिइरहेको छ।
बल्कमा आपूर्तिकर्ताबाट खरीद गर्नुको सट्टा तपाईले केहि पनि अर्डर गर्नुपर्दैन - कम्तिमा पनि ग्राहकले अर्डर नगरेसम्म। Oberlo ले तपाईको हजारौं आपूर्तिकर्ताबाट उत्पादनहरू सिधै तपाइँको अनलाइन स्टोरमा आयात गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईं त्यसपछि आपूर्तिकर्ता संग ग्राहकको आदेश राख्नुहुनेछ। आपूर्तिकर्ताले त्यसपछि ग्राहकको अगाडिको ढोकामा शिप जहाज पठाउनेछ।
यो ठेठ रिटेलर / थोक बिक्रेताको सम्बन्धमा ठूलो परिवर्तन हो किनभने खुद्रा विक्रेताले उत्पादनहरूको ठूलो मात्राको लागि भुक्तान गर्नुपर्दैन। आईटम थोक व्यापारीबाट सिधा क्रेतामा जान्छ।
Oberlo मा नि: शुल्कका लागि दर्ता गर्नुहोस्
सेल्सफोर्सआईक्यु तपाईको लागि उत्तम अनुप्रयोगहरू मध्ये एक हो ग्राहकसंगको सम्बन्ध व्यवस्थापन। यस अनुप्रयोगले तपाईंलाई ग्राहक मुद्दाहरूमा प्रतिक्रिया दिन सक्ने क्षमता दिन्छ; यदि प्रक्रियाहरूमा समस्या छ भने, तपाईंको ग्राहकहरूले तपाईंलाई निश्चित रूपमा सूचित गर्नेछन्। यस सीआरएम अनुप्रयोगले तपाईंलाई ती समस्याहरूको जवाफ दिन दिनेछ, दुबै ग्राहकको दृष्टिकोणबाट र तपाईंको आफ्नै आन्तरिक दृष्टिकोणबाट। तपाईं तुरून्त समस्याको समाधानहरू सुरू गर्न सक्नुहुनेछ।
SalesforceIQ ले तपाईंको सबै सामाजिक मिडिया च्यानलहरूलाई एक केन्द्रीय प्लेटफर्ममा एकीकृत गर्दछ। तपाइँ तपाइँका खुशी खुशी पाहुनाहरु को लागी पुग्न सक्नुहुन्छ र तिनीहरुसंग कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ, धन्यवाद सबैलाई देख्ने तरीकाले। तपाइँ आफ्ना ग्राहकहरुका साथीहरु र साथीहरु लाई नयाँ ग्राहकहरु मा रूपान्तरण को इरादा संग संलग्न गर्न सक्नुहुन्छ। यस सीआरएम अनुप्रयोगको साथ, तपाईं दोहोर्याउने व्यवसाय उत्पन्न गर्न सक्नुहुनेछ साथै तपाईंको ईकॉमर्स स्टोरको लागि राजस्वको नयाँ स्ट्रिमहरू सुरूवात गर्न सक्नुहुनेछ।
यी अनुप्रयोगहरू को साथ, तपाईं आफ्नो व्यापार अधिक प्रभावी र प्रभावी ढंगले व्यवस्थापन गर्न सक्षम हुनेछ। तपाईं द्रुत पुनःपूर्तिको लागि विक्रेता र आपूर्तिकर्तासँगको अन्तर्क्रियाको फाइदा लिई आफ्नो उत्पादन चयन र इन-स्टकहरू कायम गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
तपाईं आफ्नो ग्राहक सम्बन्ध र कुराकानी, र अन्यलाई सम्भावित अन्यलाई ब्यवस्थापन गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। यी अनुप्रयोगहरूबाट बिक्री समीक्षा गर्नाले तपाईंलाई वास्तविक समयमा ब्याज प्रवृत्तिमा प्रतिक्रिया दिन क्षमता दिनेछ, त्यो दिन तपाईंलाई बिक्री बढाउने अवसर दिनेछ।
यी अनुप्रयोगहरू मार्फत, तपाईं आफ्नो व्यवसाय अधिक कुशल र प्रतिस्पर्धी बनाउनुहुनेछ।
नि: शुल्क SalesforceIQ परीक्षणको लागि साइन अप गर्नुहोस्
टैग: इकमर्सबिक्री बल आवश्यक
सारा सेकर एक व्यवसाय कोच र स्वतन्त्र लेखक हुन् जसले एसएमबी सेटअप प्रक्रियाहरूलाई ग्राहक समर्थन र पूर्वानुमानित विकासको लागि मद्दत पुर्‍याउँछन्। लेख्ने वा कोचिंग नगर्दा, सारा उनीमा पाउन सकिन्छ (सानो, तर बढ्दै!) परिवार फार्म। सारासँग जडान गर्नुहोस् About.me/ssaker कोचिंग वा लेखन मद्दत को लागी।
कसरी सबै वर्डप्रेस टिप्पणीहरु हटाउने